Thwebula SplitCam 7.4.4.1 – Vessoft
English, Українська, Español, Deutsch...
SplitCam – a isofthiwe ukwandisa amathuba of webcam yakho. Isici esiyinhloko SplitCam yikhono ukusebenzisa ikhamera yakho yewebhu kanyekanye umbhangqwana izinhlelo noma amasevisi zokuxhumana video. Isofthiwe uyakwazi ukwengeza buso 3D kanye wigs ebusweni, ukushintsha isizinda, ukusebenzisa umshini, engeza tintfo letehlukahlukene kanye neminye imiphumela ividiyo ukuze webcam yakho ngesikhathi ividiyo nokukhulumisana. SplitCam baxhumana izithunywa popular noma amasevisi ingxoxo yevidiyo futhi kungaba Broadcasting Corporation kwevidiyo phezu edumile Ukusakaza ezisekelweni. Futhi SplitCam ikuvumela ukuthi kuyingxenye edingekayo kwesikrini futhi kwenza sikrini wamanje video iwindi.
Wokuqhekeka ukusakaza ividiyo
Ukusetshenziswa ezahlukene video nemiphumela phakathi zokuxhumana ividiyo
Ukuqopha yamavidiyo HD
Ukuthwebula izithombe of video emithonjeni ehlukene
Amazwana on SplitCam:
SplitCam Ahlobene software:
Ewebhu Isofthiwe ukuze sigcizelele ezahlukene visual effects ukusakaza ividiyo. Isofthiwe uyakwazi ukusebenzisa omunye webcam ukuze ukusakaza izicelo eziningi.
English, Français, Español, Deutsch... Yahoo! Messenger 11.5.0.228
Chat Ewebhu Popular ithuluzi for imiyalezo, okwenza izingcingo futhi uhlela izingqungquthela zamavidiyo. Isofthiwe baxhumana nezinsizakalo ayethandwa Yahoo.
English, Français, Español, Deutsch... Skype 7.31.73.104
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ethandwa kakhulu ukuxhumana nabangani emhlabeni jikelele. Isofthiwe kuqinisekisa a izinga okusezingeni lonke izwi video zokuxhumana, futhi ukushintshana elula imiyalezo.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ukwenza izwi noma amakholi wevidiyo uphinde uthumele imiyalezo. Kukhona contact ukuvumelanisa okuzenzakalelayo zedivayisi umsebenzisi.
Ewebhu Isofthiwe popular igxile ukudalwa sokuxhumana bezijabulisa kakhulu webcam. Isofthiwe ine inqwaba ezahlukene visual effects.
English, Français, Deutsch, 中文... Line 4.11.2.1298
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi for the ukuxhumana phakathi abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze amakholi wezwi, video izingcingo kanye nombhalo exchange imiyalezo.
English, Español, 中文, 日本語... Seaside Multi Skype Launcher 1.23
Ewebhu Isofthiwe for umbhalo kanye video zokuxhumana nabanye abasebenzisa izwe. Futhi kukhona kungenzeka ukuba ahlele amakamelo ezikhethekile obuhambisana ezahlukene for ingxoxo.
English, Français, Español, Deutsch... Clownfish for Skype 4.35 Standard futhi Portable
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isofthiwe yokuhumushela imiyalezo angenayo naphumayo in Skype. Isofthiwe isekela amasevisi ethandwa wokuhumusha nge eziningi izilimi.
English, Українська, Français, Español... Cyberlink YouCam 7.0.0824
Ewebhu Ithuluzi ukuba bandise amathuba ngesikhathi umsebenzi nge-webcam. Uhlelo oluhlanganisa iqoqo imiphumela ezahlukene futhi ikuvumela ukuba wengeze ukuba izingxoxo ividiyo.
English, Français, Español, Deutsch... Stamina 2.5
Development Ithuluzi ukuqeqesha abhale asheshise on the keyboard. Isofthiwe iqukethe izindlela ezahlukene ukuthi ezihlukaniswe izifundo ukukhumbula layout ukhiye.
Tixati 2.51 Standard futhi Portable
Sesifufula Iklayenti ukulanda futhi wabelane amafayela zezifufula. Isofthiwe ikuvumela ukuba ngokwezifiso ukulandwa amafayela kanye ukubuka ulwazi mayelana nabo.
English, Українська, Français, Español... MiPony 2.4
Downloaders Isofthiwe ukulanda idatha kusuka amasevisi ahlukahlukene ifayela-ukwabelana. Isofthiwe uyakwazi ukulanda idatha ngaphandle umkhawukho wesikhathi paywall.
Isithombe Isofthiwe ukulungisa nokucija izithombe ezilufifi. Isofthiwe kuqinisekisa nokuvulwa izinga image ngokuqinisa noma buthaka singagxili.